UNHCR waliin galmeessuun - UNHCR Egypt
UNHCR hojii galmee idilee isaa Zamalek (lammiilee Sooriyaatiif), Main Building (saba biroof) fi waajjira Aleeksaandiraa irraa deebisee kan jalqabe yoo ta’u, dandeettii Galmeessuu isaa suuta suutaan ni dabala.
Haala yeroo ammaa COVID-19 irraa kan ka’e iddoo UNHCR keessatti iyyattoota beellama qabatanii qofatu tajaajilama.
Of eeggannoo fayyaa itti fufee jiru ilaalcha keessa galchuun iyyattoota baay’inaan argamaniif hojimaataa fi tajaajila sirrii ta’e mirkaneessuuf, UNHCR baqattootaa fi koolu galtoota kanneen armaan gadii yaadachiisuu barbaada:
2. Kan nama dhibu, dursinee beellama malee isin gargaaruu hin dandeenyu. Gaaffii keessan gara Infoline qajeelchuu ykn odeeffannoo dabalataaf akkuma fuula Facebook keenya irratti ibsametti marsariitii Gargaarsaa keenya daawwachuu dandeessu.
3. Yeroo dheeraa eegaa fi waajjiraalee UNHCR alatti akka hin dhiphatneef, beellama dursitee murtaa’e cimsinee akka hordoftanii fi beellama keessan dura daqiiqaa 15 qofa dura waajjira fuuldura akka taatan cimsinee isin gorsina.
4. Hojimaata nageenyaa hordofuu, fageenya qaamaa guutuu eeguu, haguuggii fuulaa uffachuu fi tarkaanfiiwwan nageenyaa hunda kabajuun yeroo waajjira daawwannaa gootan, nageenya baqattootaa fi hojjettoota UNHCR isin tajaajilan mirkaneessuu fi saaxilamummaa keessan daangessuuf tumsa gaarummaa isin gaafanna balaa fayyaa hin barbaachifne kamiyyuu.
UNHCR dhaabbata koolu galtootaa fi baqattoota Masrii keessa jiraniif tajaajila galmee fi sanadoota kennu qofa yoo ta’u, kana booda namoonni dhuunfaa aangawoota Masriitti dhiyaachuun hayyama jireenyaa isaanii argachuu danda’u. UNHCR hojii kana qaama sadaffaa kamiifuu akka hin kennine, tajaajilli hundi bilisaan akka ta’e yaada keessa galchaa.
Iyyattoonni sagantaa qaban UNHCRn karaa bilbilaa fi/ykn ergaa gabaabaatiin ni qunnamu. Barreeffamni ergaa gabaabaa (SMS) bal’ina beellamaa hunda of keessatti qabata.
1. Galmee Haaraaf ykn kaardii koo haaromsuuf akkamitti beellama galmee argachuu danda’a?
Fulbaana 18 irraa eegalee beellama Galmeessaa karaalee armaan gadiitiin kennuu ni danda’ama:
Sarara Odeeffannoo UNHCR:
UNHCR Infoline Wiixata hanga Roobii: ganama sa’aatii 8:15 hanga galgala sa’aatii 15:00 dhaqqabuun ni danda’ama
akkasumas Kamisa: ganama sa’aatii 8:15 hanga galgala sa’aatii 12:00
0227390400 irratti Kaayirootti
akkasumas 0225990800 Iskindiriyaatti bilbilaniiru
Muudama galmee armaan gadii argachuuf:
Muudama galmee haaraa
Muudama haaromsa sanadaa: Baqattootaa fi koolu galtoota sanada UNHCR kan yeroon isaa darbe ykn ji’a 3 keessatti xumuramuuf jedhu qabataniif
Dabalata miseensa maatii
Galmee dhaloota haaraa (waggaa 2 gadii)
Waajjiraalee UNHCR keessatti muudama qaamaan:
Beellama galmee, haaromsa sanada (baqattootaa fi koolu galtoota sanada UNHCR kan yeroon isaa darbe ykn ji’a 3 keessatti xumuramuuf jiru qabataniif), dabalata miseensa maatii, galmee dhaloota haaraa (waggaa 2 gadii) muudamas kallattiin kennamuu danda’a waajjiraalee UNHCR keessatti qaamaan:
Waajjira Zamalek, 5 Michael Lotfallah, Zamalek, Kaayiroo
Wiixata hanga Kamisaatti ganama sa’aatii 08:00 – galgala sa’aatii 14:00 gidduutti.
Lammiilee Sudaan, Sudaan Kibbaa, Eertiraa, Itoophiyaa, Lammiilee Yaman, akkasumas iyyattoota lammiilee biroo irraa dhufaniif:
Waxabajjii 6 Gamoo guddaa, 17 Makkaa Al-Mokaramaa, Aanaa 7, Waxabajjii 6 Magaalaa
2. Galmaa’uuf ykn sanadni koo haaromsuuf yeroo hangamii fudhata?
UNHCR gaaffiiwwan dhiyaatan furuuf dandeettii isaa guddisaa jira. Gaaffiiwwan hin xumuramne bara 2021 keessatti ni hir’isna jennee eegna.
3. Akkamitti odeeffannoo quunnamtii koo haaromsuu danda’a, jijjiiramni sun faayila koo irratti calaqqisuuf yeroo hammamii fudhata?
Gaaffii fooyya’iinsa quunnamtii argachuuf, maaloo Infoline qunnamaa.
Bulchiinsa Aleeksaandiraa & Qarqara Kaabaa:
Updates torban torbaniin Database keenya irratti calaqqisa.
4. Tarkaanfiiwwan COVID qabattan maal fa'a?
Nageenyi namoota keenya yaaddoo qaban akkasumas hojjettoota keenyaa nuuf barbaachisaa dha; kanarraa ka’uun, bakka keenya hunda keessatti tarkaanfiiwwan hedduu qabna.
Yeroo eegaa namoota keenya yaaddoo qaban hir’isuu fi yeroo murtaa’e tokkotti namoota dhuunfaa gamoo keenya keessatti qabnu daangessuuf guyyaa tokkotti bakka beellama adda addaa afur uumneerra.
Bakki eegaa keenya fageenya qaamaa barbaachisu yaada keessa galchuun irra deebiin hojjetameera; akkasumas teessoo haala kanaan mallatteeffama.
Akkasumas kutaalee af-gaaffii haaraa hojjettoonniifi iyyataan kutaa adda addaa keessa taa’anii foddaa geejjibaatiin itti walqunnaman irra deebiin dizaayinii gooneerra.
Kutaan tokkoon tokkoon af-gaaffii booda disinfected kan ta’u yoo ta’u, namoota keenya yaaddoo qabaniif haguuggii fuulaa fi saanitaayizarii ni argama.
5. UNHCR irraa bilbilli naaf bilbilame, gaaffii fi deebii haaromsa sanadaa akkan godhu na afeere. Maal gochuu qaba?
Yoo haaromsa sanadootaaf gara UNHCRtti affeeraman, maaloo guyyaa fi sa’aatii ergaa gabaabaa mirkaneessaa UNHCR irraa isinitti dhufe keessatti ibsametti gara waajjiraatti dhufu. Hubadhaa, bakka UNHCR keessatti bakki eegaa daangeffame waan ta’eef, yeroo ibsame qofatti waajjira keenyatti akka galtan. Yeroo af-gaaffii eenyummaa fi iris mirkaneessuuf namoota umuriin isaanii waggaa 12 fi isaa ol ta’e qofatu argamuu qaba. Namoonni gaaffii fi deebii isaanii irratti hin argamne sanada haaromfame hin kennamu.
Guyyaa gaaffii fi deebii keessanitti, maaloo sanadoota barbaachisoo ta’an hunda fiduu keessan mirkaneessaa, kanneen keessaa:
Kaardii(wwan) UNHCR yeroon isaanii darbe miseensota dhimma keessanii hundaaf,
Paaspoortii biyyoolessaa (yoo jiraate) miseensota dhimma keessanii hundaaf,
Sanadoota biroo eenyummaa kee irratti ragaa kennaa jiran kamiyyuu,
Sanadoota jijjiirama haala dhuunfaa ykn maatii keessanii kamiyyuu irratti ragaa kennan hunda kan UNHCR akka galmeessu barbaaddan.
Adeemsi haaromsa sanadaa daqiiqaa 10 – 15 ol fudhachuu hin qabu, kunis guddina maatii keessanii fi walxaxiinsa dhimma keessanii irratti hundaa’uun. Adeemsa haaromsa sanadaa keessatti odeeffannoo baayoomeetirii ijaan sakatta’uu fi ni mirkaneessina.
Hubadhaa, haaromsa sanada keessan saffisaan kan adeemsifnu yoo sanadoonni hundi jiraatan qofa, yoo wanti tokko dhabame dhimma keessan ilaaluun rakkisaa ta’a.
Akkasumas balaa vaayirasichi daran tamsa’uu hir’isuuf of eeggannoowwan hojii irra oolan hunda akka kabajan isin yaadachiifna. Yeroo mooraa UNHCR keessa jirtu haguuggii fuulaa uffachuu fi namoota biroo irraa fageenya nageenya qabu eeguuf dirqama qabda; ofii fi namoota biroo haala gaariin eeguuf, karaa gara waajjiraatti fi mooraa UNHCR fuuldurattis haguuggii fuulaa uffachuu akka qabdan cimsinee isin gorsina.
6. UNHCR irraa bilbilli naaf bilbilame Af-gaaffii Galmee Haaraa akka naaf afeeru. Maal gochuu qaba?
Galmee Haaraaf gara UNHCRtti yoo affeeraman, maaloo miseensota dhimma kee hunda waliin guyyaa fi sa’aatii ergaa gabaabaa mirkaneessaa UNHCR irraa argatte keessatti ibsametti gara waajjiraatti koottaa.
Hubadhaa, sababa bakki eegaa bakka UNHCR keessatti daangeffameef, waajjira keenyatti yeroo agarsiifame qofatti akka galtan. Yeroo af-gaaffii miseensonni maatii hundi argamuun dirqama. Namoonni gaaffii fi deebii irratti hin argamne, hin galmoofne.
Guyyaa gaaffii fi deebii keessanitti, maaloo sanadoota barbaachisoo ta’an hunda fiduu keessan mirkaneessaa, kanneen keessaa, hunda caalaa:
Yoo jiraate, paaspoortiin biyyaalessaa miseensota dhimma keessanii hundaaf,
Yoo jiraate, sanadoota biroo eenyummaa kee fi/ykn haala dhuunfaa ykn maatii kee irratti ragaa kennaa jiran kamiyyuu.
Af-gaaffiin kun baay’ina maatii keessanii fi walxaxiinsa dhimma keessanii irratti hundaa’uun daqiiqaa 30 hanga 45 gidduutti kan turu ta’a. Baayoodaataa fi odeeffannoo quunnamtii keessan qabachuu malees, yeroo gaaffii fi deebii keessanitti suuraa akkasumas odeeffannoo baayoomeetirii (iris scan) ni kaafna.
7. Yeroon kaardii koolu galtummaa fi kaardii baqattootaa dhumu meeqa?
Ragaa koolu galtummaa (ragaa adii) ji’a 6f hojiirra oola,
Kaardii galmee koolu galtootaa (“Kaardii Keelloo”) ji’oota 18f hojiirra oola,
Yeroo kaardii galmee baqattootaa (“Kaardii Biluu”) waggaa 3f hojiirra oolu.
8. Ani ykn miseensi maatii ykn hiriyaan koo sababa kaardii UNHCR yeroon isaa darbeen rakkoon eegumsaa yoo na mudate ykn yoo qabame, UNHCR akkamitti gargaaruu danda’a?
Baqattoonni fi koolu galtoonni dhimma seeraa kamiyyuu isaan mudate kallattiin karaa imeelii ([email protected]) ykn lakkoofsa bilbilaa sarara bilbilaatiin UNHCR akka qunnaman jajjabeeffamu:
Rakkoolee eegumsaa sanadoota UNHCR yeroon isaanii darbeen walqabatee jiruuf, kutaan seeraa dhimma tokko tokkoon hordofa, dhimmicha furuuf gargaara. Kana malees, UNHCR michoota hojiirra oolmaa seeraa lama kanneen baqattoota dhimma seeraa/gaaffii kamiyyuu deeggaruuf jiran qaba:
Faawundeeshinii Mirga Baqattootaa Masrii/Egyptian Foundation for Refugee Rights: 01272020938 / 0225751118
Abbootii Seeraa Tokkummaa/United Lawyers: 01154526171